musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Kyrie Irving Nyaya Yevamwe Vana Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara YemuAmerican Basketball Player anonyanya kuzivikanwa nezita rekuti ""Uncle Drew“. Yedu Kyrie Irving Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wose anoziva iye mumwe wevatambi vanozivikanwa zvikuru muNBA. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kyrie Irving's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Kyrie Irving Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kyrie Irving akazvarwa musi we 23rd waMarch 1992 muMelbourne muAustralia. Aive wekupedzisira pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake Elizabeth Irving naBaba Drederick Irving (aimbove nyanzvi bhasiketi mutambi).
Nezvemhuri yake, Irving ihurumende yeAmerica uye yeAustralia yenyika yeAfrica -America neFrench-Canada, Irish, Scottish, Welsh, uye Shona.
Irving aingova nemakore maviri ekuberekwa apo mhuri yake yakasiya Australia kuenda kuUnited States. Pakusvika, vakagara kuWest Orange, muNew Jersey uko Irving akakurira pamwe nasisi vake mukuru, Asia Irving.
Makore maviri gare gare, Irving amai vakafa mushure mekutambura nekurwara kwenguva refu. Nokudaro basketball prodigy yakamutswa nababa vake nokuda kwechikamu chakanaka chehucheche hwake.
Nzira iyo Drederick (Irving baba) yaifungidzira iyo, kurera kwakakodzera kwaifanira kuita kudzidzisa mwanakomana wake kuti ave basketball player, chiyero icho Irving muduku aive achiita seakaberekerwa kubvuma.
Semwana mudiki Irving akatanga nekuratidzira kudzora bhora, aigona kubata mutemo-kureba hoop pazera diki re4 uye kunyudza ruoko rwekuruboshwe-ruoko panguva yaakange ave zera 6.
Izvo zvaive zvisati zvareba kwenguva yakareba Irving akatsunga uyo aigara achienda kumitambo yababa vake-yeligi, akazvipira kumutambo nekugadzira pfungwa yake yekutamba muNBA.
"Ndakaita chivimbiso kwandiri kuti ndaida kupinda muNBA muchechi yechina ... ndakanyora pane chimwe chikamu chepandeti ndikaiisa mukamuri yangu kuitira kuti ndiione zuva rega rega. Zvaingova chiyeuchidzo chenguva dzose chezvandakanga ndichifamba. "
Akayeuka makore Irving gare gare.
Kyrie Irving Dzidzo:
Ruzivo rwe Irving rwechikoro runosanganisira dzidzo yake ku Montclair Kimberley Academy uye St. Patrick High School. Paaiva pamakambani akasiyana, Irving aive ari mutambi webhuseki anoshanda achikudza unyanzvi hwake mumutambo kuburikidza nekuita maawa ekudzidza nekuita.
Inozivikanwa pakati pematanho ake akakosha panguva iyoyo yaitungamira St.Patrick kuenda kumakwikwi ehurumende semudiki uye kuwana mibairo yakati wandei mukati megore rake repamusoro. Iwo ma accolades anosanganisira Gatorade State High Chikoro Mutambi wegore anokudza uye kusarudzira timu yeMcDonald's All-American.
Kyrie Irving Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira:
2009 ndiyo gore iro irving akatanga basa rekoroji kuburikidza nekuita kubhokisi re basketball yeYunivhesiti yeDuke. Akatanga kutamba Duke munguva yeBCB basketball 2010-11.
Kunyange zvazvo Irving akachengetwa kwemwedzi yakawanda mushure mekusimudzira kukuvadza panguva yepfumbamwe yepfumbamwe, kushanda kwake kwose muZIKNUMX kuonekwa kweDuke kwaive kwakakwana kuita kuti chivimbo chake chiwedzere kupinda mu11 NBA Draft.
Irving akasarudzwa seyekutanga anotarirwa naCleveland Cavaliers uye mwedzi yakazotevera yakanzi 2012 Rookie yegore. Kufambira mberi zvakasimba kusvika musi Irving ndeye 5-Time All-Star uye mumwe wevatambi vakakurumbira munyaya iyi.
Kyrie Irving Hukama Hupenyu Hupenyu:
Kyrie Irving achiri kutoroora. Tinokuunzira mashoko pamusoro pehukama hwake hwekare uye huripo.
Chokutanga chaiva ukama hwake naArea Andrea. Doo yakasangana mu2013 uye yakatarwa kwemakore maviri isati yaidana iyo inopinda mu2015.
Kusvikira kuparadzana kwavo, Irving naAreria vaiva mhirizhonga dzaiva neukama hwakakonzera kuberekwa kwemwanasikana anonzi Azure Elizabeth.
Kufambira mberi, Irving yakasimbisa ukama hwake neAmerica nyota nyeredzi uye YouTube sensation Hannah Stocking.
Duo rakatanga kufambidzana nenguva apo Irving akanga achiri naA Andrea Wilson. Ukama hwavo hahuna kupera kwegore vasati vatumidzwa kuti inopera.
Tevere hwaive hukama hwaIrving nemuimbi weR & B muimbi Kehlani Parishi. Hwavo hwaive hukama hwakasimba hwakaona mutambi webhasikiti achizivisa Kehlani seiye akasarudzika mune rimwe ma tweets ake.
Hazvina kutora nguva refu pamberi pehukama hwavo hwarovawo matombo mushure mekunge zvanzi Kehlani abiridzira Irving newaimbova mukomana wake.
Irving ikozvino yakabatana nehuwandu hwemagariro ehurumende uye mutungamiri wechikwata, Kayce K. Kunyange zvazvo hakuna mumwe wavo akatsigira kufambidzana, ivo kazhinji vanoonekwa vachipedza nguva yakanaka pamwe chete.
Kyrie Irving Hupenyu Hwemhuri:
Kyrie Irving akaberekerwa mumhuri yevanhu vane 4. Tinokuudzai zvishoma nezvemhuri yemhuri.
Nezve baba vaIrving: Drederick Irving ndiye baba vemutambo webasketball. Iye ari pamudyandigere bhasiketi mutambi ane marekodhi akanaka kunyangwe asiri kutamba muNBA.
Drederick anozivikanwa nekukurudzira mwanakomana wake kuti atambe nzira yake kuenda kuNBA, achiwana zvikwiriso zvinoita kuti mutambi wemu basketball abve pamudyandigere nekusvika kwavakasvika.
Nezve amai vaIrving: Elizabeth Irving ndiye amai venyama yeIriving. Akanga ari mutambi aiita volleyball munguva yekoroji yeBoston University.
Nehurombo, haana kurarama kwenguva yakareba zvakakwana kuti aone mwanakomana wake achivandudza fomu yakazara yemitambo sezvo akafa muna 1996 apo Irving aingova mana chete.
Nezve amai vokurera vaIrving: Shetellia Riley Irving ndiamai vokurera vaIrving uye amai vekubereka vehanzvadzi yake, London.
Nezve Irving's Siblings: Irving ane hanzvadzi mbiri chete. vanosanganisira mukoma wake mukuru Asia Irving uye hanzvadzi-duku, hanzvadzi, London Irving.
Asia ndiye akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeTemberi uye muridzi weElizabeth Smith. Akakurira neIrving kwemakore uye ari fan guru re basketball rake.
ILondon, kune rumwe rutivi, ndiyo mutevedzeri wechidiki uye jewel yemhuri.
Kyrie Irving Biography - Untold Basa Rechokwadi:
Kuzivikanwa kwaIrving mubasketball kunouya kubva musanganiswa wehunyanzvi hwake hwemitambo nehunhu hwake sa "Sekuru Drew" mune kushambadzira kwaPepsi Max.
Zviziviso zvaive chikamu chekugadzirisa kugadziriswa kwakatanga muna 2012. Kufambira mberi kwakanyanya kuna 2018 Uncle Drew ava mifananidzo yeAmerica yemitambo yakatungamirirwa naCharles Stone III uye yakanyorwa naJay Longino.
Mukushambadzira uye firimu, Irving anoita basa remunhu akwegura anotonga uyo anotonga vasikana vaduku mumutambo we basketball.
Asi kunze kwekubvumirana kunotarisana naPepsi ndevaya vakasaina naNike, EA Sports, Skull Candy, Mountain Dew, Foot Locker, Panini uye ProCamp.
Kusimuka kubva kune zvibvumirano Irving ane 3 chisina chikwata chebhasiki chekusimba rinonzi Kyrie 3 yakatangwa mu2014.
Kyrie Irving Hupenyu hweMunhu:
Kunze kwenhandare, Irving munhu ane hunyanzvi ane hunhu hunosanganisira kuverenga, kunyora, kuridza baritone sax nekutamba.
Kunyange zvazvo akaita zvakanaka chaizvo kuti anyengedze nharo, 2017 ndiyo gore raakakakavhiringidza nokutaura zvakasimba kuti nyika yakazara.
Iye gare gare akakumbira ruregerero uye akatsanangura kuti mazwi acho aireva kukurudzira vanhu pakuita tsvakurudzo dzavo pachavo pane kugamuchira zvavakadzidziswa.
Kyrie Irving Mararamiro:
Nekufungidzirwa kwemari inokwana $ 50million, Irving hairatidzi nenyeredzi yakazara inotakura sezviri pachena mumotokari yake yakasanganiswa inosanganisira 2012 Kia Sorento, Ferrari 458, Lamborghini (Black), Audi R8 (Black) uye Jeep Wrangler.
Kuzvipeta zvese, imba yake yekugara yeWestlake muOhio yakatengeswa pamadhora mazana manomwe nemakumi mashanu ezviuru muna755,000, chiratidzo chekuti chero imba yaanogara parizvino inogona kunge isinga nyanye kana ichienzaniswa neyakavakirwa imba.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kyrie Irving Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!